Miverina amin'ny Google Panda | Martech Zone
Fanarenana avy amin'ny Google Panda
Asabotsy, Aprily 23, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Orinasa vitsivitsy izay fantatro no naratra tamin'ny fanovana algorithm antsoina hoe Panda. Panda dia nifantoka ary nokendrena ho lasibatra fambolena anaty fa manana nisy fiantraikany tamin'ny orinasa maro. Ny namako iray dia voatery nandroaka ny mpiasan'ny asany voalohany noho ny fahaverezan'ny laharam-pahamehany tamina serivisy lahatahiry matihanina nitarika ny filaharana nandritra ny folo taona teo ho eo. Androany, niato ny fifandraisana amina iray amin'ireo mpanjifanay tianay indrindra. Ny fatiantoka goavana amin'ny vola miditra amin'ny dokam-barotra dia tsy maintsy nalamina (mbola hanohy hanohana azy ireo izahay satria tsy isalasalako fa hiverina ny fifamoivoizany).
Nihaona tamin'ny mpanjifa aho androany ary somary somary manjombona ilay efitrano. Fanerena be izy ireo hanohy hampitombo ny vola miditra, noho izany dia goavana ny fihemorana toy izao. Soa ihany fa mahasarika ny vokatr'izy ireo, ka nanoro hevitra azy ireo aho mba hijery akaiky gamification haka ny mpankafy masiaka azy ireo ary hamorona atmosfera izay ahazoana valisoa sy fankatoavana tsy tapaka ho an'ny fampiasana ny serivisy omeny.
Amin'ny lafiny fanatsarana ny motera fikarohana dia somary henjana kokoa ny resaka. Rehefa tian'i Google ny fiompiana atiny dia nanosika ireo fotodrafitrasa izahay hamoaka ny votoatiny. Ny lohahevitra manokana ao amin'ny arsenalin'izy ireo dia mety misy pejy 22,000 ao ambaniny - ary natosinay izy rehetra. Goavana tokoa ny tranokala, saingy nanararaotra araka ny tokony ho izy ny Google - nanondrotra ny fifamoivoizana sy ny vola miditra.
Talohan'ny Panda (Google dia mbola manohy manamboatra), mora ny namoaka atiny vaovao ary manana izany laharana tsara izany. Toa nisy fiatraikany tsara tamin'ny teny sasany nanova ny fahaizanao mamoaka atiny sy milahatra amin'ny teny lakile manaraka - na dia tsy dia misy ifandraisany loatra aza izany. Tsy izay intsony.
Taorian'ny Panda, ny algorithm dia toa napetraka nifamadika. Izay pejy rehetra nisy tamin'ny tranokala izay tsy mitana laharana na mitarika fivezivezena dia lasa lanja lehibe tokoa izay nitaritarika ny tranonkala iray manontolo. Nandritra ny 4 volana dia nijery ny tranokala mitohy milatsaka isika - tsy amin'ny filaharana fotsiny, fa amin'ny teny lakile kokoa kosa ny teny lakile izay manome ny volan'ny karoka indrindra. Tsy tsara.
Ka inona no ataon'ireo orinasa voadona noho ny algorithm Google Panda manao manaraka?
Mialà amin'ireo pejy mitono. Ny pejy tsy dia misy vidiny firy, ny atiny tsy dia tsara, ny fiatraikany ambany ary ny laharana ratsy dia manintona ireo pejy lehibe amin'ny tranokalanao. Ario izao izy ireo.
Raha manana toeram-piompiana votoaty marindrano… midika izany fa tsy misy dingana marobe amin'ny fitetezana anelanelan'ny pejin-tranonao sy ny pejy ambany indrindra amin'ny tranokalanao… avereno dinihina ny ambaranao. Raha tokony havoaka amina lohahevitra lava volo ny atiny lehibe… potehio amin'ny fampahalalana kely kokoa. Ohatra: Raha manana tranokala amin'ny marketing aho ary ny rambony lava dia ny fomba laharana amin'ny Google… fa tsy manana pejy tokana momba ny filaharana ao amin'ny google, mety manana pejy lohahevitra momba ny Marketing sy Google izay manambatra ny ankamaroan'ny atiny ho vondrona kely manan-tsaina.
Tohizo ny fampiroboroboana ireo pejy lehibe sy laharana tsara anananao. Mba hanoherana ny lanjan'ireo pejy tsy dia mahomby dia mila manohy mampiroborobo ireo pejy ao anatin'ny tranokalanao izay mandeha tsara ianao - mba hanohanana ny laharan'izy ireo fotsiny.
Ataovy tsy misy kilema ny lafiny hafa rehetra amin'ny SEO - ao anatin'izany ny robots.txt, sitemaps.xml, pinging, ny fananganana pejy sns. Tsy misy hadisoana intsony na hadalana amin'ny fambolena atiny. Ajanony ny fialantsiny ary amboary ny tranokalanao. Amboary ny kalitao, ny solontena, ny hafainganana… ny momba azy rehetra.
Tsy zavatra ratsy ny fiompiana atiny (mbola tia an'i Wikipedia i Google). Ny fitazonana tranokala iray izay manararaotra ny motera fikarohana ary manolotra atiny lehibe sy misy ifandraisany betsaka dia tsy zavatra ratsy. Ankafizin'ny mpanjifa ny atiny tsara (na dia tsy raharahiany aza i Panda). Ny fitantanana toeram-pambolena votoaty dia nanjary sarotra kokoa hatramin'ny Panda, na izany aza, satria izao ny habetsaky ny cotent vokarinao dia nihaona tamina fiheverana ratsy kokoa momba izay ezahinao hotanterahina.
Ny fidirana amin'ny haino aman-jery sosialy ho an'ny fanamafisana sy ny fampiroboroboana, ary koa ny fampiharana ny paikadim-pifandraisan'ny mpampiasa hafa toy ny mailaka, ny fikolokoloana ary ny gamification, dia afaka mandray mpitsidika marobe ary manamboatra ny banga anao amin'ny famadihana azy ireo ho mpitsidika miverimberina.
Fanaraha-maso ny fizarana laharam-pahamehana Keyword?
Lahatsary: ​​Fialana amin'ny lisitry ny fiantsenana miaraka amin'i Listrak
Apr 23, 2011 ao amin'ny 10: PM PM
Ka io indray dia tonga amin'ny kalitao noho ny habetsany.
Azo antoka fa fandanjalanjana izany, Atul. Lahatsoratra iray tonga lafatra dia mety mivarotra zavatra vitsivitsy… fa lahatsoratra lehibe zato kosa no hamidy bebe kokoa. Ny atiny maloto an-taonina mahery dia nitondra ireo mpitsidika an'ireny tranonkala ireny foana - saingy mino aho fa tena nivadika ho vola nananany izany.
Apr 29, 2011 ao amin'ny 3: PM PM
Tokony hotadidinao ihany koa fa Google izao dia tranonkala manome valisoa izay mitana ny laharana avo indrindra amin'ny antony malemy, izany no mahatonga ireo tranonkala filalaovana tombontsoa lehibe ankehitriny.
Jul 4, 2011 amin'ny 9: 42 AM
Ity dia lahatsoratra tena tsara. Ny tranokalako HostingPost.com dia forum be dia be fa voadona mafy, mandatsaka 90% ary mbola milatsaka… Mbola miady hevitra aho raha te hanandrana zavatra hafa tanteraka. Misaotra
21 Jun 2012 amin'ny 12:09 AM
Ny tahan'ny fihenjanana dia mandrefy ny asan'ny mpamaky
ao amin'ny bilaoginao. Izany hoe, inona ny lahatsoratra manokana novakian'izy ireo rehefa
niantsona tamin'ny pejin-tranonkalanao. Raha afaka mandany fotoana kalitao bebe kokoa ny olona ao aminao
bilaogy, tena tsara eo imason'i Google izany.
Ny fotoana farany nanamarihako ny tahan'ny fandefasako ny Google analytics dia
56%. Amin'ny ambaratonga fototra, mamporisika izany fa mbola manana be dia be ihany aho
asa hatao mba hampidina ny isan-jato.
Arakaraka ny maha ambany ny tahan'ny fihenam-bidy no tsara kokoa ho an'ny bilaoginao. Raha ny fitsofana anao
latsaka ao anatin'ny 50 - 100% ny tahan'ny, tsara raha manomboka manoratra atiny mahaliana ianao
afaka manampy ny mpamaky amin'ny fomba miavaka tokoa izany. Ampirisiho ny lahatsoratra mifandraika amin'izany
ary mamporisika ny hevitra.
Jul 6, 2012 amin'ny 9: 05 AM
Lahatsoratra lehibe, heveriko fa miaraka amin'i Panda, Google dia manandrana manafoana ireo SEO rehetra izay mila fanampiana hahazo filaharana tsara nefa tsy mampiasa Adwords. Heveriko manokana fa nalain'izy ireo somary lavitra izany, heveriko fa manandrana mamoaka ny denaria tsirairay avy amin'ny olona amin'ny Internet izy ireo. Tian'izy ireo atao ho azy rehetra izany.
28 Jul 2012 amin'ny 10:51 PM
Amin'ny fahatsorana rehetra, rehefa avy nijery ny tranokalanao aho dia mieritreritra fa hiasa amin'ny fampiharana rafitra fitantanana votoaty fantatra ary manafatra ny atiny. Mieritreritra aho fa mety hijaly ianao noho ny rohy marobe ao amin'ilay pejy.